Global Voices teny Malagasy » 35 Taty Aoriana, Ankatoavina Ny Asa-Vavolombelon’i Óscar Romero · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Febroary 2015 10:04 GMT 1	 · Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon Orbe Nandika (en) i Gabriela García Calderón, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, El Salvador, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Politika
Hosodoko an-drindrindra manome voninahitra ny Monsignor Romero nataon'i Jamie Morgan, San Francisco. Sary avy amin'ny mpisera Flickr Franco Folini  (CC BY-SA 2.0).
Alatsinainy 24 Marsa 1980 angamba no nanomboka ny andavanandron'ny mpiangona ao San Salvador manatrika ny raharaham-panompoan'i fiangonana ao amin'ny Hopitaly Andriamanitra Mpiahy. Nosembanin'herisetra, anefa, izany andro izany, ary heverina hatrany ho andron'ny fahafaham-baraka 35 taona aty aoriana. Maty voatifitra nandritra ny nanaovany ny raharahany ny mpanatotonsa anjara vavaka, ny Monsignor Óscar Arnulfo Romero.  Nandalo ny fony ny bala. 62 taona izy tamin'izany fotoana izany.
Ankoatra ny maha-mpitondra fivavahana azy dia fanta-daza teo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ihany koa i Romero. Ny omalin'ny andro namonoana azy dia niteny tamin'ny miaramila manamboninahitr'i El Salvador tahaka izao izy :
13 taona taorian'ilay famonoan'olona, tamin'ny 1993, dia nisy fikambanana iray najoro hanadihady ny heloka bevava ratsy indrindra nitranga nandritra ny ady an-trano Salvadoriana , ny Vaomieran'ny Fahamarinana, nanatsoaka hevitra fa mpitofitra nanao kendritohina no nahafaty an'i Romero. Ny anaran'ilay mpitam-basy dia i Marino Samayor Acosta, kaporalin'ny MPiambina Nasionaly efa tsy misy intsony amin'izao fotoana izao ary tao anatin'ny mpiandraikitra ny fiarovana ny filoham-pirenena. Nolazaina fa nomena 114 dolara i Marino Samayor Acosta tamin'io famonoana io. Tamin'ny 6 Novambra 2009, nanapa-kevitra ny hanokatra ny famotorana tamin'ny famonoana an'i Romero ny filoha tamin'izany fotoana izany Mauricio Funes , ho fanarahana ny didy avy amin'ny Fitsarana Iraisan'ny Amerikana Misahana ny Zon'Olombelona tamin'ny 2000.
Tamin'ny 24 marsa 1990, folo taona taorian'ny vono olona, efa nandeha tany ambadika tany ny ezaka haha-olomasina an'i Romero. Efa ho 15 taona taty aoriana, tamin'ny 3 Febroary 2015, nanambara ampahibemaso an'i Óscar Romero ho maritioran'ny Fiangonana ny Papa Fransoà , novonoina noho ny “fankahalana ny finoana.”
Na dia efa 30 taona lasa aza izao no nitranga ny famonoana, dia mbola tsarovan'ny fampitam-baovao isan-karazany hatrany ny Monsignor Romero, tahaka izany ny tranonkala LupaProtestante , izay nanoratra vao haingana hoe:
Ny blaogy SuperMartyrio, mandritra izany fotoana izany, manaiky  fa misy fandraisana anjaran'ny filoha teo aloha Funes tamin'ny fampanaovana an'i Romero ho olo-masina.
Mandritra izany fotoana izany ny tranonkala Opiniones impertinentes, nijery ny  fahadisoana sasany nataon'i Romero:
Niady tamin'ny tsy rariny sy ny herisetra ny Monsignor Romero. Toy ny maneso ihany fa ny [antoko politikan'ny filoha Funes] ny Farabundo Martí National Liberation Front  [Mandam-Panafaham-Pirenena Farabundo Marti] ihany no afa-nijoro tao El Salvador tamin'ny fanaovan-javatra mifanohitra amin'izay notorian'i Romero.
Nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity i Laura Vidal .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/02/18/67677/
 Óscar Arnulfo Romero.: http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_Romero
 tahaka izao izy: http://encuentroselsalvador.org/index.php/frases-y-pensamientos/19998-frases-y-pensamiento-monsenor-oscar-arnulfo-romero-galdamez
 ady an-trano Salvadoriana: http://en.wikipedia.org/wiki/Salvadoran_Civil_War
 Papa Fransoà: http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Francis
 tranonkala LupaProtestante: http://www.lupaprotestante.com/blog/monsenor-oscar-arnulfo-romero-pastor-profeta-solidario-2/
 nijery ny: http://nachouria.blogspot.fr/2009/11/monsrnor-romero-un-obispo.html
 Farabundo Martí National Liberation Front: http://en.wikipedia.org/wiki/Farabundo_Mart%C3%AD_National_Liberation_Front